Yabona phezulu phaya, nguPierre Lemaitre, kwimuvi. Uphengululo lwam. | Uncwadi lwangoku
Ndiyabona kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukuba namhlanje iyavula Uhlobo lwemovie de Yabona phezulu phaya, inoveli UPierre Lemaitre, ophumelele iGoncourt 2013. Kwaye ndonwabe kakhulu kuba bendiyithanda xa ndiyifunda ndibuyele emini. Ukuphela kukaJuni, ndifumana eyam uphononongo lomntu ukuze nabani na ongasaziyo esi sihloko salo mbhali ubalaseleyo waseFrance akwazi ukusifumana kwaye asonwabele. Kuba ewe, kukho ubomi basemva kokufa UCamille Verhoeven.
1 UPierre Lemaitre
2 Yabona phezulu phaya
3.1 UHenri D'Aulnay-Pradelle
3.2 UAlbert maillard
3.3 I-perouour ye-Edouard
4 Yintoni ebadibanisayo
6 Ngoko ...
Uzalelwe eParis ngo-1951, uPierre Lemaitre yenye yezona zinto zibalulekileyo ababhali abadumileyo nabaziwayo baseFrance kule minyaka imbalwa idlulileyo. Eyaziwa kwihlabathi liphela kwaye iphumelele impumelelo enkulu kunye nelo polisa lincinci njengoko likhulu kwezobuntlola kunye namabali amangalisayo alilo. UCamille Verhoeven (Irene, alex, Rosy kunye noJohn y Camille), ngumbhali wezinye izihloko ezinjengezinto ezinambuzelayo Isinxibo somtshato, Iintsuku ezintathu nobomi o Ubutyebi obungenabuntu.
Yabona phezulu phaya
Ngo-1914, nje phambi kokuba adutyulwe ngenxa yokungcatsha umbuso, nangona wayevuselelekile Emva kwexesha, ijoni lase-France uJean Blanchard wabhala wathi: «Ndikunika i-aphoyintimenti ezulwini, apho ndinethemba lokuba uThixo uyasihlanganisa. Yabona phezulu phaya, mfazi wam othandekayo… ». Umbhali wale noveli, uPierre Lemaitre, enkosi ekugqibeleni ngokuboleka eli binzana ngesihloko, kanye njengokuba eyinikezela incwadi kumajoni azo zonke izizwe ezawa kwiMfazwe yeHlabathi yokuQala. Into ebalulekileyo kuyo ikwayi rhafu, isimntwisiwe kwamanye amajoni amathathu aphambili, oonobumba abathathu nganye ingalibaleki kwaye inethamsanqa elahlukileyo.
Ushiyeke ufuna ukuba bekuqhubekileAyisiyiyo kuphela yokuqhubeka nokuhamba kunye nabalinganiswa abaphambili (ngakumbi u-Albert Maillard ochukumisayo), kodwa ngokungayeki ukonwabela kunye nokuncoma isitayile esimanzi, sigcwele ubukrelekrele kunye neengxoxo ezilungileyo kakhulu, kwaye phantse namaxesha e-surreal abaliswa ngokuhlekisa kunye nesimanga esingaqhelekanga. Ngapha koko, kumaxesha amaninzi awunako ukuluphepha uncumo olwaziyo, oluhlekisayo okanye oluvuyisayo embindini womdlalo opheleleyo.
Eyona meko imbi kakhulu emva kwaloo Mfazwe Enkulu, amaxhoba abo-ngaphandle kwabahlali-ekwakukho amajoni amaninzi asindayo, njengoko abo babulawa emfazweni baba ngamagorha. Abalinganiswa abaphambili bathathu kula majoni asindileyo.
ULieutenant D'Aulnay-Pradelle Yinto yokhathalelo ukuba umbhali sele ekubonisile ngokucacileyo njengezinto ezincinci, ezinobuqhophololo, ezikhohlisayo nezinamabhongo ngaphandle komlinganiso okanye ukungangxami. Ungumkhohlisi ongenakho ukukhetha ngaphandle kokukuthanda kuba uyazi ukuba iyakuphela kakubi, loo rabble enjalo ayinako ukohlwaywa nakwisandla sabona babhali bangalindelwanga. Ukuqala, kwiintsuku ezine phambi komkhosi we-armistice ngo-1918, kunye nokuphumelela loo mbasa ilahlekileyo, wayalela indlela engeyomfuneko kwaye engenangqondo yokuba amadoda akhe athathe inqanaba lomhlaba.
Ngenxa yoko akathandabuzi ukubulala ngasemva ababini kwaye uqhubeke nabanye ababini bethathe ithuba lokuwa kweqokobhe. Omnye utyhalelwa emngxunyeni aze angcwatywe ephila xa uqhushumbe. Elinye ijoni, lenzakaliswe kakubi emlenzeni kwaye lonakaliswe ngendlela engathethekiyo sisikrelemnqa esasikrazule umhlathi wasezantsi, sikwazile ukusindisa ubomi baso. Ukusuka apho, ubudlelwane phakathi kwabo buya kuba bobobuhlobo obukhethekileyo kunye nobukhulu.
UAlbert, ohlanguliweyo, uya kuzinikela ngokupheleleyo kumsindisi wakhe, uEdouard Pericourt, ngokuzincama okungadinwayo, ukuzincama kunye nombulelo ongapheliyo kwityala lobomi onalo kuye. Obo buhlobo buya kubanceda ukuba bajongane nomothuko wokubona into abaye baba yiyo emva kokuphulukana nolusu lwabo emfazweni. Kwaye uluntu lubajike lwaba yintoni, apho kusekho usizi olufanayo, uhanahaniso, umahluko weklasi, umona, amabhongo kunye nokuziphatha okubi, nangona umoya wokuphucuka, isibindi kunye nethemba, ukholo, ukuzithemba nokukhohlisa.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, yahluke ngokupheleleyo. UAlbert unemvelaphi ethobekileyo, uneentloni, Ngobugwala, enoloyiko kwaye ezele kukungazithembi, kodwa ukhupha ububele nemfesane ngaphandle kwemida kwaye uya kwenza nantoni na nokuba injani kumhlobo wakhe uEdouard, nangona xa babephambili babengazani. Le nkcazo ihlala ihamba kunye nezimvo ezihlekisayo zomama esingazange simbone, kodwa esifunda kuye iingcinga zakhe malunga nobuthathaka bonyana wakhe, nangona kunjalo, onokuba nesibindi kubo bonke abalinganiswa.
U-Edouard uvela kusapho olusisityebi, unyana webhanki ephumeleleyo enobudlelwane obunamandla kurhulumente kwaye wayehlala nobutshaba naye ngenxa yokungaqondi kwakhe kunye nokudelela ubuntu bakhe obunemvukelo, obuhlanya, obunamaphupha kunye nobuntu. Nangona kunjalo, unodade omthandayo. Uyigcisa elinesipho esikhethekileyo sokuzoba, kodwa ngomphefumlo onzakele ngokunzulu yindlela akhathazeke ngayo kwaye, ekugqibeleni, ukhathazeke kakhulu ziintlungu kunye neziyobisi zokulwa nayo.
Inqaku kukuba u-Edouard akafuni kwazi nto malunga nosapho kwaye nangaphantsi ukubuyela nabo., ngakumbi kuyise kunesilonda esibi esimshiye engenabuso kwaye engafuni ukuzilungisa. UAlbert akasokuze ayiqonde, kodwa uyakuyamkela kwaye ayikhathalele, kuqala kwisibhedlele sentsimi emva koko aququzelele ukutshintshelwa kwakhe eParis phantsi kwesazisi sejoni elibulewe kwinkohliso yokuqala nolwaphulo-mthetho abaza kulwenza.
Ubomi buka-Albert, ukusukela ngoko, buya kuhlala buqhubeka neemvakalelo kunye nemithambo-luvo ukuba baphantse bamgqiba xa uEdouard, olikhoboka lokuqala ku morphine kwaye kamva kwi heroin kwaye engaze ashiye indlu elusizi ababelana ngayo, idee Ubuqhetseba obulula njengoko buninzi nje. Bonke abasebenzisa eli thuba lenzondelelo, ukuthanda izwe kubangcono ngenxa yoloyiso kunye nokugula (kunye nokuba netyala) kwabasemagunyeni ukuba bahloniphe amaqhawe abo emfazwe ngokucebisa ukhuphiswano lwezikhumbuzo kwimemori yabo. Omnye wabo baya kuwela ubuqhetseba iya kuba nguyise.
Kwangelo xesha, uLieutenant Pradelle, owayekwangumntu osisityebi kodwa wehla, Uyifumene into ebeyifuna: udumo kunye nobutyebi obonyuswe ngumtshato wakhe UMadeleine Pericourt, udadewabo kaEdouard, enkosi kwimeko yokumkholelwa efile kodwa efuna ukumfumana kwaye amngcwabe kwitempile yosapho lwakhe. UMadeleine uzakudibana noAlbert, oza kuba yeyona ngxaki inkulu kuba nguye, ngesicelo sikaEdouard, wabazisa ngokusweleka kwakhe.
U-Pradelle uphethe inkampani elawula ukukhangela, ukufumanisa nokuhambisa amajoni Iwele kwimida eyahlukeneyo emangcwabeni kunye necropolises ezintsha ezakhelwe le njongo. Kodwa, njengesikhohlakali esigqibeleleyo, iindlela zakhe zezona zicekisekayo kunye nokuziphatha okubi onokucinga ngako, okukhokelela kwintlekele ebuhlungu nangakumbi: leyo yokuphulukana nemizimba okanye ukwenzakaliswa kwabo ukuyibeka kwiibhokisi ezincinci ukugcina iindleko, ukudideka kwizazisi okanye ngokuhambisa nje iibhokisi zingenanto okanye zigcwele ukungcola.
Iza kusebenzisa amaqabane angasebenzi kakuhle, abasebenzi abancinci nabangafundanga kunye nokuhlangana kwabasemagunyeni Ndiyabulela ngobuhlobo obuhle notatazala wakho. Le, nangona kunjalo, yayilungile okokuqala kwaye iyazi kakuhle ukuba uluhlobo luni na lomgquba. U-Pradelle uza kuvinjelwa ngaphandle kokugwetywa de angene kwigosa elingwevu, ecekiswa ngabo bonke ngenxa yokunyaniseka, oyivumba apho kwaye agqibe ukukhupha ingxelo etshabalalisayo eza kutyhila inkqubela phambili.
Iimeko ezahlukeneyo zabalinganiswa zinxibelelene nombulelo ku isakhiwo esiphumeleleyo kunye nesingqisho esigqibeleleyo sebali, apho eyona njongo inkulu nehlala ihleli ikukubona ukuba uAlbert noEdouard bazakuphumelela na kubuqhophololo (kwaye ndinqwenela ukuba bengazifumani). Kananjalo ukuba usapho lukaEdouard luyakwazi ukuba unyana wabo uyaphila, ngakumbi xa uAlbert egqibela ngokunxibelelana nabo, esebenzela utata wakhe kwaye ethandana nenye yezicakakazi endlwini yakhe, kwaye, njengoko benditshilo ngaphambili, ukuba uPradelle unikwe umzekelo olungileyo.
Isiphelo inokuba kuphela kwento enokubakho kwaye kukho indawo ephelisa imiphetho kunye nokushiya iindlela ezivulekileyo Abanye abalinganiswa abasesekondari abaye bavela, njengentombazana encinci yomhlolokazi ongumqeshi kwigumbi ahlala kulo uAlbert noEdouard, kwaye ngubani okhulisa ubuhlobo kunye nabo njengoko buhamba, ngakumbi no-Edouard.
imvakalelo xa ugqibile yile yokuba ufundile inoveli entle, engeyombali, efana nemfazwe okanye ipicaresque, kodwa nayo yonke into ngaxeshanye kwaye ibhalwe ngokungaqhelekanga. Kuyachulumancisa, ukuhamba, ukonwabisa kunye namaqhinga. Awunakho ukubuza ngaphezulu. Ungathandabuzi ukuyifumana.
Utyunjelwe i-13 Cesar Awards kunye ne-5, ophumeleleyo, ukhokelwa ngumdlali weqonga kunye nomlawuli u-Albert Dupontel kunye neenkwenkwezi zeBuenos Aires nguNahuel Perez Biscayart, phakathi kwabanye. Ngokuchukumisa El phantom ye-opera o UMouline Rouge, Ifilimu ihamba phakathi kweqonga lonodoli kunye nokuthembela.
Ukuqaqambisa uyilo lwemveliso kunye nesinxibo, ngokuqatshelwa okukhethekileyo komsebenzi wobugcisa we UCécile Kretschmar, eyile ngaphezulu kwe- Iimaski ezingama-20 esetyenziswe ngumlinganiswa ophambili. Ndiyathemba ukuba ngumbulelo olungileyo. Sobona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Yabona phezulu phaya, nguPierre Lemaitre, kwimuvi. Uphengululo lwam.
Iincwadi eziBalaseleyo zeBantu abaDala